Aqoonkaab caafimaadkaaga bisha ramadaan | Aqoonkaab
caafimaadkaaga bisha ramadaan
Jul 04, 2015Caafimaadka
maqaalkan waxaanu idiinku soo gudbinaynaa talooyin muhiima oo ku saabsan hababka looga hortago mushkiladaha caafimaad ee bisha ramadan ,waxa kale oo aanu idiin soo gudbinaynaa hababka ugu haboon ee soonka ka dhigi karta mid faaido badan u leh caafimaadkeena .
bisha ramadan waxa haboon inaad cuntooyinka aad cunaysaa wax badan aanay ka duwanaan kuwii aad hore u cuni jirtey ,waxana haboon in cuntadaadu noqoto mid dheelitiran si aanu jidhkaagu u waayin nafaqadiisa .
marka la eego saacadaha dhaadheer ee laga soomayo wadamo badan sanadkan waxa haboon inuu qofku ku suxuurto cuntooyinka kakan (culus) maxaa yeelay cuntooyinka kakan waxay caloosha ku jirtaa muddo 8 saacadood ah, cuntooyinka kakan (culus) waxa ka mida sarreenka ,digirta ,bariiska,daqiiq(bur).
sidoo kale waxa haboon in cuntooyinka afurka iyo suxuurta ay ka koobnadaan qaybaha kala duwan ee khudradaha ,hilibka.
cuntooyinkan yareyso xiliga afurka
waxa kale oo haboon inaad cabto biyo iyo sharaab inta u dhaxaysa suxuurta iyo afurada
Previous PostBaro sida loogu tukado salaadda Janaasada(maydka) Next PostMuuqaalada moobilka cusub ee Samsung G A8 oo la soo bandhigey